Safiirka Mareykanka ayaa cambaareyn culus kala kulmay aqoonsashada doorashadii Qoor-qoor.
MUQDISHO, Soomaaliya – Madasha Xisbiyada Qaran oo ka falcelisay guusha Qoor-qoor ee doorashadii baarlamaanka Galmudug ee Villa Soomaaliya aqoonsan tahay ayaa ku sifeeyay mid aan u dhicin qaabkii la qorsheyay.
"Dowladda Federaalka Soomaaliya waxay iska indha tirtay dalabkeena ahaa in doorashaddu ku qabsoonto si xor ah, xalaal ah oo loo wada dhan yahay," ayaa lagu yiri qoraal kasoo baxay Xisbiyadda mucaaraadka.
Donald Yamamota, danjiraha Mareykanka, oo aqoonsaday coddeynta, ayay ku sifeeyeen "safiir taageeray nidaam doorasho oo la khiyaanay oo si cad loo musuqmaasuq layska indha tiray hab lawada ogol yahay".
Sidda ku xusan qoraalka, Madasha ayaa eedeynta ay u jeedisay safiirka u cuskaneysa in uu wali jiro is-jiid-jiid siyaasadeed.
"Safiirka oo dhiibay daacadnimadiisa iyo dhex-dhexaadnimada wuxuu jebiyey tiirarka iyo mabaa'diida dowlad wanaaga iyo horumarinta dimuqraadiyadda ee siyaasadda arrimaha dibadda Mareykanka," ayay xuseen.
Dhanka kale, iyagoo hoosta ka xariiqay baahida loo qabo doorasho daah-furan oo lawada ogol-yahay ayna mar walba ka shaqeyn doonan arrintaas ayay caddeeyeen in ay aqbali doonin wax ka duwan.
Talaabooyinka ay xukuumada ku sameysay cod-bixinta Galmudug ayay ku nuux-nuux sadeen in ay su'aal gelin karto natiijada doorashooyinka federaalka ee sanadkan qorshuhu yahay in ay dhacaan.
Ugu dambeyntii, madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo Ra'iisul wasaare Xasan Cali Khayre ayay shaaciyeen in tan iyo markii ay xafiiska yimaadeen ka shaqeynayeen xasiloonida daradda dowlad goboleedyada.
Farmaajo oo la kulmay Yamamota xilli laga dalbadey in uu is-casilo
Soomaliya 15.08.2020. 18:35
Kulanka labada mas'uul ayaa ka dhacay qeybta nasashada garoonka diyaaradaha Muqdisho.
Mareykanka oo go'aan ka qaatay geedi u socodka doorashadda Galmudug
Soomaliya 02.12.2019. 16:25
Beesha Caalamka oo ka walaacsan khilaafka doorashada Galmudug
Soomaliya 28.01.2020. 21:00
Soomaliya 27.01.2020. 11:20
Afhayeenka cusub ee baarlamaanka Galmudug oo la doortay
Soomaliya 17.01.2020. 11:41